Diyo post :: देउवाले दिल्लीसँग के–के मागेका थिए ? पढ्नुहोस् भारतीय टिभीलाई देउवाले दिएको अन्तर्वार्ता (भिडियोसहित) देउवाले दिल्लीसँग के–के मागेका थिए ? पढ्नुहोस् भारतीय टिभीलाई देउवाले दिएको अन्तर्वार्ता (भिडियोसहित) - Diyo post
काठमाडौं, २९ वैशाख । तराईसँग काठमाडौंलाई जोड्ने फास्टट्र्याक निर्माण कार्यको विरोधमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ताबारे सायदै थाहा होला । भारतको राज्यसभा टेलिभिजनलाई देउवाले १२ जुन २०१३ मा दिएको अन्तर्वार्तामा आफू भारतसँग माग्न आएको बताएका थिए । यतिबेला सान्दर्भिक हुने देखेर हामीले देउवाको अन्तर्वार्ताको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं :
तपाईं दिल्ली भ्रमणमा हुनुहुन्छ । सोनिया गान्धीसँग भेट गरिसक्नुभयो । विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदसँग पनि भेटघाट गरिसक्नुभयो । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग पनि भेट गरिसक्नुभयो । के थियो एजेन्डा ?
हाम्रो एजेन्डा निकै सस्तो छ । नेपालमा माओवादी इन्सरजेन्सी थियो । राजाले पनि सारा अधिकार लिएका थिए । नेपालमा लोकतन्त्रका बहालीका लागि दलहरु र माओवादीबीच बाह्रबुँदे समझदारी गराउन भारतले जसरी मद्दत गर्यो, त्यसका लागि मैले धन्यवाद दिएँ । अहिले शान्तिको वातावरण बनेको छ । नेपालमा गणतन्त्र आएको छ । संविधान अहिले पनि बन्न सकेको छैन । नेपालमा संघीयतासहितको संविधान ल्याउनका लागि हामीलाई भारतको सहयोग चाहिएको छ । लजिस्टिक चाहिएको छ । मैले सोनियाजीसँग रिक्वेस्ट गरेको छु । र, सलमानजीसँग पनि मागेको छु । प्रधानमन्त्रीसँग पनि मागेको छु । प्रधानमन्त्रीसँग अरु कुरा पनि भयो । हाम्रो नेपालको विकासको विषयमा पनि कुरा भयो । काठमाडौंदेखि निजगढसम्मको द्रूूत गतिको सडक हो, त्यो ४५ मिनेटको दूरीमा पर्दछ । डेड घन्टामा भारत पुग्न सकिन्छ । यसकारण भारतसँग जोडिन सजिलो हुनेछ । यसले नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ । यसका लागि सहयोगको मैले आग्रह गरेको छु । त्यस्तै, म सुदूरपश्चिमबाट आउँछु । त्यहाँ महाकाली नदी छ । त्यहाँ पुल छैन । १९९३ मा बनाइएको पुल निकै पुरानो भएको छ । त्यसैले मैले फोरल्यान्ड पुल बनाउनका लागि माग गरेँ । प्रधानमन्त्रीले ठूलो आश्वासन दिनुभएको छ । अरु पनि धेरै कुरा भएका छन् । आईटीलाई सुदूरपश्चिममा सेटअफ गर्नको लागि माग गरेको छु । हुलाकी राजमार्गको कुरा पनि गरेको छु । धेरै कुरा मैले प्रधामन्त्रीसमक्ष राखेको छु । उहाँले नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली रहेसम्म भारत सबै तरिकाले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । संविधान बनाउनका लागि भारतले पूरा सहयोग गर्छ भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बहुदलीय प्रजातन्त्र लागि र चुनाव गराउनका लागि जो लजिस्टिक सहयोगको कुरा गर्नुभयो । नेपालमा धेरैभन्दा धेरै लगानी लैजाने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासको संरचना बनाउने कुनै विशेष प्रतिबद्धता भारत सरकारले गरेको छ ?
आज हाम्रो कुराकानी भयो । प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, नेपालमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निकाल्न सकिन्छ । भारतमा बिजुली आवश्यक छ, नेपालमा पनि छ । नेपालमा हिमालय स्रोतहरु जुन छन्, त्यहाँ भारतको लगानी रह्यो भने त्यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ । यसमा मैले भारतलाई अघि बढ्न अनुरोध गरेँ । पर्यटन क्षेत्र पनि छ । हामीले सबै नेतालाई भनेका छौं, उनीहरु सकारात्मक पनि छन् । उनीहरुले नेपालमा स्थायित्व र संविधान बनेपछि जरुर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
भारत र नेपालको सम्बन्ध ऐतिहासिक छ । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । माओवादी जंगल छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आयो । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु भयो । तपाईंहरु सबै मिलेर राजतन्त्रलाई खतम गरेर त्यहाँ लोकतन्त्रको स्थापना भयो । यसमा भारत र भारत सरकारले तपाईंहरुलाई ठूलो सहयोग गर्यो । जसलाई नेपाल र दुनियाँले स्वागत गरेको छ । तर, केही मानिसहरु यो विषयप्रति आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् । नेपालको घरेलु मामलामा भारतको भूमिकाको विषयमा माओवादीले पनि आपत्ति जनाइरहेको छ । के यो मानसिक संरचनामा परिवर्तन आएको छ ?
कहिलेकाहीं केही पार्टीले यसरी सोचेका छन् । तर नेपालमा त्यस्तो छैन । केही पनि छैन । त्यो पनि क्षणिक हो ।
त्यो कुनै गम्भीर मसला होइन ?
नेपाल एक सानो देश हो । नेपालका दुई छिमेकी निकै शक्तिशाली छन् । जनसंख्या र अर्थ व्यवस्थाका हिसाबले पनि उनीहरु शक्तिशाली छन् । नेपालको विषयमा आमरुपमा चीन र भारतको द्विविधा हुने गरेको छ कि कसको धेरै भूमिका हुनुपर्छ ? या दुवैबीच सन्तुलन बनाउनुपर्छ ? के लाग्छ तपाईंलाई ?
भारत र चीन हाम्रो छिमेकी मित्र हुन् । उत्तरी चीनसँगको सम्बन्ध पनि खुसीकै कुरा छ । हामी नेपालको हितका लागि दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं । म यसमा कुनै अन्तर्विरोध देख्दिनँ ।
चीन नेपालसँग यो चाहन्छ कि पश्चिमा देशले नेपाली भूमिलाई प्रयोग नगरुन्, खासगरी तिब्बती मामलामा, के यो साँचो हो ?
चीन सरकारको केही सेक्युुरिटी कन्सर्न छ । तर हामीले एक चीन नीति अपनाएका छौं । हाम्रो देशबाट कुनै पनि चीनविरोधी गतिविधि हुनेछैन ।
भारत अहिले पनि माओवादीलाई मनाउने कुरा ठूलो चुनौती मानिरहेको छ ।
नेपालमा संविधान बनाउने कुरा अहिले पनि पूूरा भएको छैन । राजनीतिक दलको साख पनि गुम्दै छ, तपाईं यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?
हाम्रोमा पहिलोपटक २००८ मा चुनाव भएको थियो, जो संविधानसभाको थियो । हामीले संविधान बनाउन पाएनौं । तर नेपालको अनुभवअनुसार हामी एकात्मक राज्य प्रणालीमा थियौं । नेपालका लागि नयाँ कुरा हो, संविधानसभा । त्यसमा हामी विभिन्न अतिवादी समूहबाट आएका छौं । माओवादीजस्तै वाम र क्षेत्रीय पार्टीहरु पनि आएका छन् । यसमा सबैले लचकता अपनाउनुुपथ्र्यो । तर, अपनाएनौं । एकात्मक राज्य प्रणालीबाट विकेन्द्रित राज्य प्रणालीमा जानु निकै कठिन कुरा हो । फेरि हामी चुनावमा जाँदै छौं । हामी सबै पार्टीले रिअलाइज गरेका छौं कि लचकता आवश्यक छ । सबैको भावना समेटेर संघीय संविधान बनाउनेछौं । मलाई विश्वास छ । यसबाट नेपालमा स्थायित्व आउनेछ । प्रजातन्त्र स्थापित हुनेछ ।
जो तपाईंले भन्दै हुनुहुन्छ, सोही कुरा एक साक्षात्कारमा प्रचण्डले मलाई पनि भनेका थिए । उनले यो कुरा मानेका थिए कि, माओवादी जनयुद्धमा गयो, त्यसपछि लोकतन्त्रमा आयो । उनीहरुको अवस्थामा केही बदलाब आयो नि होइन ? यो भनिन्छ कि नेपाली कांग्रेस र एमाले एकातर्फ छ र माओवादी एकातर्फ । संविधानसभाको चुनाव र संविधान बनाउन राजनीतिक दलबीच इमानदारितापूर्वक एकता हुनुपर्छ, होला ?
यो साँचो हो कि प्रचण्डले जो स्विकारेका छन् । माओवादी पूर्णरुपमा आतंक लागू गर्न चाहन्थ्यो । माओवादी पूरै रुपान्तरण हुन बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पूरै कन्भर्ट हुनुपर्छ । यसमा हामी सबै मिलेर ल्याउनुपर्छ । भारतले पनि उत्साहित पार्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई परिवर्तन हुन समय लाग्छ ।
राष्ट्रपतिसँग तनाव भएको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिए । बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बने । जो ठाउँ तपाईं माओवादीलाई दिन खोज्दै हुनुहुन्छ, उनीहरुको अनुभव तपाईंहरुको भन्दा कम छ । नेपालमा दलहरुबीच इमानदारितापूर्वक एकताको जरुरी छ, तपाईंहरु कसरी मिल्नुहुन्छ ?
हामी प्रजातन्त्रमा कर्मचारी, सेनामा कुनै राजनीतिक प्रभाव नहोस् भन्ने चाहन्छौं । उनीहरुले आर्मीमा जसरी हस्तक्षेप गरे, त्यो उनीहरुले छोड्नैपर्यो । राजीनामा दिनुप¥यो । सेना व्यावसायिक हुन जरुरी छ । त्यस्तै, प्रहरी र कर्मचारी पनि । त्यसमा कसैको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । यो प्रजातन्त्रको मूल मान्यता हो । उनीहरुको मानसिकता पुरानो थियो ।
सेना समायोजन माओवादीको ठूलो मुद्दा हो नि ?
उनीहरु सेनामा समायोजन हुन्छन्, तर निकै कम । उनीहरु आफैं निकै थोरै मात्रै सेनामा आएका हुन् । त्यसैले यो कुनै समस्या होइन ।
लोकतन्त्रमा तपाईंले सेनाको कुरा गर्नुभयो, त्यो संस्था पनि हो । निकै विवादास्पद पनि छ । मिडियामा आलोचना पनि भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बनेर काम गरिरहेका छन् । तपाईंलाई लाग्दैन सर्वोच्च अदालत प्रभावित हुँदैन ?
यसमा कुनै प्रभाव हुँदैन । त्यसलाई सम्झौतामा समेत उल्लेख गरिएको छ । केवल निष्पक्ष रुपमा चुनाव गर्न यो सबै गरिएको हो । किनकि प्रधान्यायाधीश नै निष्पक्ष हुन सक्छन् । त्यसैले उहाँलाई बनाइएको हो । निर्वाचनपछि सबै कुरा तहमा आउँछ । सम्झौतामा भनिएको छ, चुनावपछि उहाँ आफ्नो घर जानुहुनेछ ।